IProton Radiation Therapy yeCancer Cancer Centre -California Protons
QAPHELA UKUBA SIBONELELA NJANI UKHUSELEKO LWABASEBENZI OKHUSELEKILEYO NOKUQESHWA KWEELEMEDICINE
Iinketho zeTele teleicine ziyafumaneka ngoku
ukufuna Isigulana Portal858.283.4771
Ubuchopho kunye noMqolo
I-Pancreatic kunye neBile Duct
Intloko kunye neNtamo
Ukuphindaphinda kunye neSekondari
Iindleko kunye nokuFikelela
Yilwa nomhlaza kunye
Ukuba ufunyaniswe okokuqala, okanye ujongene nomhlaza ophindaphindiweyo, unyango lweproton lunokuba lolona khetho lwakho lolona hlobo lonyango lukhuselekileyo nolusebenzayo emhlabeni.
Unyango lwe-Proton lungeyona ndlela inokubhengeza oluncinci, lukhuthazwayo ngeendlela ezininzi zomhlaza ukuba ngokwembali ziye zanyangwa ngeendlela zesintu ezifana nokuhlinzwa, ichemotherapy kunye nemitha ye-X-ray. Ifumaneka eSan Diego, eCarlifonia iZiko lokunyanga uMhlaza eliphambi kwonyango, uphando kunye ne-biotechnology. Ngaphezulu kweminyaka engama-50 yamava adityanisiweyo eprotheyini, oogqirha bethu abadumileyo kwihlabathi lonke banyusa unyango lomhlaza kunye nezixhobo zokunyanga isifo somhlaza esiqhelekileyo kunye nesinqabileyo.
Unyango lweTumor radiation
Ukuhanjiswa ngokuthe ngqo ngaphakathi kweemilimitha ezi-2, ubuchwephesha bokuhlola usinga bepensile, obunikezelwa kuwo onke amagumbi amahlanu onyango, kukhupha idosi ephezulu yemitha ebulala umhlaza ehambelana ngqo nobume obahlukileyo nobukhulu besisu. Le teknoloji ijolise kakhulu ekuhlaseleni ithumba ngokuchaneka okufana ne-laser, ngelixa ichitha izicubu nezempilo ezingqongileyo.
IZiko loNyango loMhlaza laseSan Diego
Ekhaya lelinye lamaqela e-radiation oncology anamava kwihlabathi kunyango lweproton unyango, oogqirha bethu bayamkelwa kwilizwe liphela kwaye bafunwa zizigulana ezivela kwihlabathi liphela. Ngapha koko, umlawuli wethu kwezonyango uye wanyanga ngaphezulu kwe-10,000 XNUMX yezigulo zomhlaza wedlala lendlala — ngaphezulu kwakhe nabani na emhlabeni.
Funda ngakumbi malunga neziko lethu lonyango lomhlaza.
IZiko lokuNyanga uMhlaza
Ukusuka koogqirha bethu ukuya kwiinkonzo zeconcierge ukuxhasa iinkqubo, sinika elona nqanaba liphezulu lokunyamekela abaguli kwiziko lethu lonyango lomhlaza. Abasebenzi bethu bazinikele kwidabi lomntu ngamnye lokulwa umhlaza kwaye yonke imihla sizama ukudala imeko apho izigulana zethu, iintsapho zabo kunye nabahlobo baziva bemkelekile kuluntu oluzele ngabantu abanobuhlobo, abaluncedo abaphatha wonke umntu ngendlela abaya kwenza ngayo kumalungu osapho lwabo.
Ngaba unyango lweProton
Unyango lwe-Proton radiation lungasetyenziselwa ngokukodwa, okanye ngokudibeneyo notyando kunye ne-chemotherapy, ukunyanga iintlobo ezininzi zomhlaza kunye nezidumba, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho:
Umhlaza weNtloko kunye neNtamo
Ubunzima kunye neThumba
Umgangatho oqhelekileyo we-X-Ray
Imisebe ye-X-ray esemgangathweni kunye nonyango lwe-proton zombini ezi ntlobo zi "radiam yangaphandle" radiotherapy. Nangona kunjalo, iipropathi zazo nganye zahluke kakhulu kwaye zikhokelela kumanqanaba ahlukeneyo okuvezwa kwemitha kwindawo ye-tumor kunye nezihlunu ezikufutshane kunye namalungu.
Imibuzo malunga nokuhlawulwa kwe-inshurensi kunye nonyango?
Ndafuna ukuhlala ubomi obude kwaye andifuni ukuzibeka emngciphekweni wokuhlaselwa sisifo sentliziyo okanye ukonakala kwentliziyo, ngenxa yoko ndakhetha unyango ngonyango. Emva kothetha-thethwano noGqr. Chang, bendisazi nje ukuba iiProtocol zaseCalifornia kulapho ndifuna ukuba khona. Uchithe ixesha elininzi kunye nam kwaye ndiziva ndinentembelo kakhulu kumandla akhe.
Isigulana soMhlaza weSifuba
I-Proton yonyango 'yayitshintsha umdlalo.' Akukho lusuku luhamba apho andicingi ukuba sibe nelungelo elingakanani na lokuphila iikhilomitha ezintandathu ukusuka kwelinye lawona mazwe aphambili eProton emhlabeni. Bonke abasebenzi bayamangalisa. Uvelwano, ulwazi kunye nokulandelela kwakumangalisa.
Utata ka Kasey Harvey
Isigulana samachiza Rhabdomyosarcoma Isigulana
Andikhange ndibenazo ziphumo zakwamayeza amayeza am. Ndiwaqeqeshile amaqela endoda yam kunye nabasetyhini ababhinqileyo elizweni lonke kunyango lwam, ngaphandle kokuphoswa lusuku olunye. Ndibugcinile ubudlelwane endibuxabisa kakhulu kunye nenkosikazi yam, uJoAnn, kwaye ndihlala ndikhuthele njengotata nomcebisi ekuhlaleni.
Isigulana somhlaza womhlaza wamathumbu
Sichonge unyango lwe-proton ngenxa yokukwazi ukungena ngokukhuselekileyo kwinkqubo yengqondo ukufikelela kwinxalenye yesisu esingazange sichukunyiswe ngaphambili. Kwaye kuba itekhnoloji kwiCalifornia Protons yeyona intsha kwaye ihambele phambili kwilizwe, sacinga ukuba 'kutheni le nto kwenye indawo?'
Utata kaNatalie Wright
Isigulana i-Pervatric Brain Tumor isiguli
Ibhlog malunga nethemba, ukuphilisa kunye namandla okunqoba. Funda Okuninzi
Cwangcisa utyelelo lwakho
I-9730 Ihlobo Ridge Rd
© 2022 California I-Protons Cancer Therapy Centre umthetho wabucala Immimiselo & nemiqathango
Internet yokuzonwabisa unomathotholo umcimbi TV Imidiya yokuncokola Inqaku leendaba Isigulana sangaphambili okanye esikhoyo Usapho okanye uMhlobo Ukuthumela kugqirha Ukudluliselwa esibhedlele Ukuthumela i-Inshurensi omnye Ingaba uve ngathi?*
Ukuba enye, nceda uxele
Idilesi yesitrato Idilesi ye2 isixeko imeko AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew Hampshireijezi NewNew MexicoInew yorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IcelandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmaqhawe aseMerikaAmaqhawe aseYurophuAmaqhawe asePacific Ikhowudi yeziphu
HematologyI-Oncology yonyangoI-Oncology yePediatricI-Radiation OncologyOncology yokupandaI-Oncology NursingYeFizikikiUluhluomnye
Uve njani ngalo msebenzi?
Incwadana / Iposikhadi kwiPosi
Ileta yobuqu / isimemo
Umlawuli / Umphathi